हाउजिङ र अपार्टमेन्टमा घर-फ्ल्याट दिन्छु भन्दै ६ सय परिवारलाई फसाएका सुधीर बस्नेतको रामकहानी
६०० परिवारले घर, फ्ल्याट नपाएको, ७ हजारले सहकारीको बचत डुबाएको सुधीर बस्नेत ठगी प्रकरणमा न्यायका लागि १० वर्ष लडेका पीडितहरू सरकारको साथ नपाएपछि फेरि सुधीरकै पछि लागेका छन् । नेपालमा विधिको शासन नि...
nepalhomes.com . ९ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
१० महिनामा कमर्शियल जग्गा र प्लटिङमा ३१ प्रतिशतले बढ्यो कर्जा रकम
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउन–वैशाख)मा कमर्शियल रुपमा जग्गा खरिद गर्न र प्लटिङमा ८ अर्ब ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तो कर्जा रकम गत असार मसान्तको तुलनामा ३१.६ प्रत...
nepalhomes.com . १ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
घर बनाउन अनुमानित लागत कसरी निकाल्ने ?, यसरी मूल्यांकन गर्नुहोस् निर्माण कम्पनीले दिएको लागत
घर बनाउने वित्तिकै खर्चको कुरो हाइहाल्छ । जीवनभर कमाएर एउटा घर बनाउनुपर्ने हुन्छ । एउटा कन्सल्ट्यान्ट वा ठेकेदारले दिएको लागतमा भरोसा गरेर घर बनाउनुपर्छ । यदि हामीलाई घर निर्माणका विषयमा सामान्य जा...
nepalhomes.com . २ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
सुधिर बस्नेतको कोहिनुर अपार्टमेन्ट लिलामीमा, कर्मचारी सञ्चय कोषले निकाल्यो सूचना
काठमाडौं । चर्चित घरजग्गा व्यवसायी सुधिर बस्नेतको ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका–२ ग्वार्कोस्थित १० रोपनी ९ आना जग्गा र सोही जग्गामा निर्माणधिन अपार्टमेन्ट भवन लिलामीमा जाने भएको छ । ऋणदाता कर्मचार...
nepalhomes.com . ३ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
महाराजगञ्जको ‘कर्मा रेसिडेन्सेस’मा प्रि–बुकिङ खुला, अहिल्यै बुकिङ गरे २५ लाख छुट
काठमाडौं । महाराजगञ्जमा निर्माण गर्न लागिएको लक्जरी हाईराइज आवास परियोजना ‘कर्मा रेसिडेन्सेस’को प्रि–बुकिङ खुला भएको छ । अहिल्यै अपार्टमेन्ट बुकिङ गर्नेले प्रतिबर्गफिट दुई हजार रुपैयाँ छुट पाउने छन...
nepalhomes.com . ४ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौंमा जग्गाको सरकारी मूल्य दुई वर्षदेखि एउटै, कहाँको कति ?
काठमाडौं महानगरपालिकाले दुई वर्षदेखिकै पुरानै मूल्य कायम राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकन गरेको छ । महानगरले शुक्रबार नगरसभामा पेश गरेको आगामी वर्षको आर्थिक विधेयकमा ...
nepalhomes.com . ५ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
यस्तो छ सहरी पूर्वाधारकेन्द्रित काठमाडौं महानगरको बजेट
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिन् । बजेटले काठमाडौं महानगरभित्र सहरी पूर...
पोखरामा बन्दै ७ सय युनिट अपार्टमेन्ट, कुन ठाउँमा कति मूल्य ?
काठमाडौं । पोखराको जिरो किलोमिटरबाट बाग्लुङ बसपार्क नपुग्दै बायाँतर्फ मोडिएर लभ डाँडातिर लाग्दा पस्र्याङमा गगनचुम्बी भवन बनिरहेको देखिन्छ । विशाल भवनको अगाडि र पछाडि स–साना घरहरु पनि बनिरहेका छन् ।...
nepalhomes.com . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौंमा २५० ठाउँ निःशुल्क सौचालय सञ्चालनमा आउँदै, ३३ संस्थासँग सम्झौता (सूचिसहित)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा २५० ठाउँ निःशुल्क सार्वजनिक सौचालय सञ्चालनमा आउने भएका छन् । आफूसँग भएका सौचालय निःशुल्क सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन इच्छुक संघसंस्थासँग काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्झ...
nepalhomes.com . ९ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
एक महिनामै एक लाख २३ हजार कित्ताकाट, नयाँ भूउपयोग नियमावलीले रोक्ला ?
काठमाडौं । वैशाखमा घटेको जग्गाको कित्ताकाट जेठमा पुनः बढेको छ । जेठमा देशभरी एक लाख २२ हजार ८ सय कित्ताकाट भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । वैशाखमा आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा कम एक ला...
nepalhomes.com . १० दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमिको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म मालपोतमा जग्गा धितो बन्धक राखेर बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्या...
nepalhomes.com . ११ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
‘फार’ भनेको के हो ? कति तलाको घर बनाउने भन्ने फारले निर्धारण गर्छ ?
सरकारले हालै ‘बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड–२०७८’ पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । जसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र अग्ला भवन निर्माणमा फ्...
nepalhomes.com . १४ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
११ महिनामा ४८० अपार्टमेन्ट किनबेच, देशभरी नयाँ अपार्टमेन्ट बन्दै
काठमाडौं । हाइराइज भवनमा अपार्टमेन्ट किनबेच सुस्त देखिएको छ । अपार्टमेन्ट स्टक नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा चार सय ८० युनिट अपार्टमेन्ट बिक्री भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकल...
nepalhomes.com . १५ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
मालपोतमा सेवा प्रवाह बढे पनि घट्यो राजश्व, सवा ४ अर्ब असुली
काठमाडौं । जेठ महिनामा घरजग्गा किनबेच र सेवा प्रवाह बढेपनि जेठ महिनामा मालपोत राजश्व घटेको छ । जेठमा घरजग्गा किनबेच लगायत विभिन्न प्रकारको सेवा प्रवाहबाट देशभरी ४ अर्ब २४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ राजश...
nepalhomes.com . १६ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
जेठमा घरजग्गा किनबेच २२ प्रतिशतले बढ्यो, सुनसरीमा सबैभन्दा धेरै कारोबार
काठमाडौं । वैशाख महिनामा सुस्ताएको घरजग्गा कारोबार जेठमा पुनः उकासिएको छ । तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिकै बाबजुद जेठमा घरजग्गा किनबेच १७.८१ प्रतिशतले बढेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले...
बैंकबाट जग्गा धितो राखेर कर्जा दिन बन्द
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जग्गा धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्न बन्द गरेको छ । भू–उपयोग ऐन २०७९ बमोजिम कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण नगरीएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि बैं...
nepalhomes.com . १७ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
कृषि र गैह्रकृषि क्षेत्र छुट्याएर मात्रै कित्ताकाटको सिफारिस दिन भूमि मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । स्थानीय भूउपयोग परिषदले नयाँ ऐन र नियमावली बमोजिम कृषि तथा गैह्रकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने र सोही बमोजिम स्थानीय तहहरुले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस दिन सरकारले निर्देशन दिएको...
वैशाखमा बढ्यो १९ अर्ब घरजग्गा कर्जा, १० महिनामा ७६ अर्ब प्रवाह
काठमाडौं । ०७८ चैत महिनामा घटेको घरजग्गा कर्जा वैशाखमा पुनः लयमा फर्किएको छ । तरलता अभाव र बढ्दो ब्याजदरकै बिच पनि वैशाख महिनामा घरजग्गा क्षेत्रमा १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कर्जा बढेको हो । चालु आर्...
nepalhomes.com . १९ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
असारमा निक्षेपको ब्याजदर नबढ्ने, कर्जाको बढ्ने
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले चार महिनाअघि तोकेको ब्याजदरलाई असारमा पनि निरन्तरता दिने भएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको हो । अहिले ‘क’ व...
बनिबनाउ घर किन्‍न राम्रो कि आफै बनाउन ? अनुभवी इञ्‍जिनियरकाे सुझाव
जीवन जिउन नभई नहुने न्यूनतम आवश्यकता हो, गाँस, बास र कपास । खानको लागि अन्‍न, ओत लाग्‍ने छानो र एकसरो लुगा नभई मान्छेले अरु कुरा सोँच्दैन । मान्छे जीवनभर दौडधुप र संघर्ष गर्ने पनि गाँस, बास र कपास...
nepalhomes.com . २१ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
हात्तिवनमा धेरै अपार्टमेन्ट बिक्रीमा, दुई करोडसम्मका बढी, कहाँ कति ?
काठमाडौं उपत्यकाभित्र हात्तिवनमा सबैभन्दा धेरै अपार्टमेन्ट बिक्रीमा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । जसमा एक करोडदेखि दुई करोड मूल्यसम्मका अपार्टमेन्टको बाहुल्यता छ । बिक्रीमा राखिएका अपार्टमेन्टमा धे...
nepalhomes.com . २२ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
भूमि १० उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण हुँदै, तपाईंको जग्गा कुनमा पर्‍यो कसरी थाहा पाउने ?
सरकारले भू–उपयोग नियमावली २०७९ जारी गर्दै जग्गाजमिन १० उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ । कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्...
nepalhomes.com . २३ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय जग्गा ४ आना १ दाम भन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक
काठमाडौं । सरकारले भू–उपयोग नियमावली २०७९ मार्फत जग्गाको कित्ताकाटमा थप कडाई गरेको छ । १० जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नियमावली भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । नयाँ ...
nepalhomes.com . २४ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
आगामी वर्ष पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिने
काठमाडौं । सरकारले तीन सय स्थानीय तहका ५ लाख परिवारलाई जग्गधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी वर्षको बजेटमार्फत जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता द...
nepalhomes.com . २५ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
पाँडे साेल्टीले भने- बार्दलीबाट शहर हेर्न डाँडातिर मौलिक शैलीको घर बनाउँछु
- अर्जुन घिमिरे (पाँडे) मेरो पुर्खौली घर नुवाकोटको ककनी हो । बालाजुबाट १७ किलोमिटर दुरीमा पर्छ, पुर्ख्याैँली घर । बुवा, दाजु–भाउजू उतै बस्‍नुहुन्छ । म परिवारसहित काठमाडौंमा बस्छु । शहरमा मेरो घर छ...
बजेटमार्फत घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रयास
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रयास गरेको छ । यही समय भू–उपयोग नियमावली र भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन पनि ल्याएको छ । अहिले घरजग...
nepalhomes.com . २६ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
पोखराको सराङकोटमा बन्दैछ ‘सूर्योत्थान लक्जरी अपार्टमेन्ट’, मूल्य डेढ करोडदेखि सुरु
पोखरा गएपछि सराङकोट नपुगे भ्रमण यात्रा पूर्ण हुँदैन । पर्यटकीय शहर पोखराको मुख्य आकर्षण हो, सराङकोट । मनमोहक हिमाल र सुन्दर शहरको दृश्यावलोकन गर्नमात्र होइन, प्याराग्लाइडिङ र जीपलाइनमा रमाउन पनि सर...
nepalhomes.com . २८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
जग्गाको कित्ताकाटका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउँदै भूमी मन्त्रालय
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट गर्नका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउने भएको छ । बुधबार जारी भएको नयाँ भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गा कित्ताकाटका लागि कार्यविधि बनाइने भएको हो । अब...
nepalhomes.com . २९ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
जमिनलाई १० भागमा वर्गिकरण, खेत बाँझो राखे एक लाखसम्म जरिवाना
खेत बाँझो राख्‍नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थासहित भू–उपयोग नियमावली जारी भएको छ । बुधबार भूमि मन्त्री शशी श्रेष्ठले भू–उपयोग नियमावली जारी गरेकी हुन् । भू–उपयोग नियमावलीमा जमिनलाई...
फारको रेसियो ४.५ कायम गर्दै भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन, अपार्टमेन्टलाई प्रोत्साहन
काठमाडौं । सरकारले शहरी क्षेत्रमा हाईराइज अपार्टमेन्ट तथा कमर्शियल भवन निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन गरेर ...
nepalhomes.com . १ महीना अघि पूरा समाचार पढनुहोस
मध्यपहाडी राजमार्गका १० नयाँ शहरलाई तीन अर्ब बजेट
काठमाडौं । सरकारले पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा बनाउने भनिएका १० नयाँ शहर आयोजना सम्पन्‍न गर्न ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । सरकारले ‘नयाँ शहरः विकासको आधार’ भन्‍ने नारासहित देशभर...
अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने बजेटमार्फत घोषणा
काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने विषयलाई आगामी वर्षको बजेटले पनि सम्बोधन गरेको छ । सरकारले आगामी वर्षदेखि अनौपचारिक रुपमा भइरहेको घरजग्गा कारोबारमा कडाई गर्ने नीति लिएको छ ...
बजेट ०७९/८०: एकभन्दा बढी घर किन्नेले शतप्रतिशत थप रजिष्ट्रेसन शुल्क तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा किनबेचमा कडाई गर्ने अभियान स्वरुप एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्नेमाथि कडाई गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी वर्षको बजेटमार्फत धेरै घरजग्गा खरिद गर्नेस...
घरजग्गा किनबेचमा कडाई, पूँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशत पुग्यो
काठमाडौं । । सरकारले घरजग्गा किनबेचमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर बढाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पूँजीगत लाभकर बढाएका हुन् । सरकारले घरजग्गा बिक्री गर्दा लाग्न...
२० प्रतिशतसम्म अपार्टमेन्ट युनिट विदेशीलाई बिक्री गर्न दिने घोषणा
काठमाडौं । सरकारले विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न खुला गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बर्षको बजेटमा एकसय युनिटसम्मको अपार्टमेन्टमा बढीमा २० प्रतिशत् अर्थात् २० युनिट अपार्टमेन्...
आर्थिक सर्वेक्षण भन्छ, ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्यूतको पहुँच पुग्यो, मधेश प्रदेशमा शतप्रतिशत
काठमाडौं । ०७८ फागुनसम्म देशभरी ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्यूतको पहुँच पुगेको छ । मधेश प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिडबाट ९९.६६ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको ‘आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९’ले ...
विशाल ग्रुपले टौखेलमा बनाउने हाउजिङको भूमि पुजा, ९ करोडसम्मका घर बन्दै
काठमाडौं । तीन व्यवसायिक घराना विशाल, देवेनारा र बाबा ग्रुपले ललितपुरको टौखेलमा बनाउन लागेको हाउजिङ परियोजना ‘गोदावरी भ्याली’को भूमि पुजा सम्पन्न भएको छ । गोदावरी जाने हाइवेसँग जोडिएको ४० रोपनी क्ष...
आर्थिक सर्वेक्षणः भैंसेपाटीमा मन्त्री र मुख्यमन्त्री आवास निर्माण ७६ प्रतिशत सम्पन्न
काठमाडौं । ललितपुरको भैंसेपाटीमा निर्माण भइरहेको मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आवासको काम ७५ प्रतिशत भन्दा बढी सम्पन्‍न भइसकेको छ । ०७८ फागुनसम्म मन्त्री आवास ७७ प्रतिशत र प्रदेश प्रमुख तथ...
annapurnapost.com . १ घण्टा अघि
reportersnepal.com . ७ घण्टा अघि
ratopati.com . १४ घण्टा अघि